Ama-Movie ama-Drama Ahamba Phambili Angu-63 Wake Waba khona - Ukuzijabulisa
Ama-Movie ama-Drama Ahamba Phambili Angu-63 Wake Waba khona
Okungenani okukodwa kwalokhu okukhethiwe kuzokwenza ukuthi ukhale, uhleke, futhi ucabange konke ngasikhathi sinye.
Ngokuzithoba i-Everett Collection
Amabhayisikobho amahle kakhulu wedrama akayona into eyodwa nje. Abanye bahlanganisa amahlaya nobuhlungu benhliziyo, ukuthandana nobunzima, noma isenzo nesintu. Bangakusiza ukubalekela noma uvule amehlo akho kumaqiniso ongakaze uwabone. Okuhamba phambili bakwenza kokubili.
Uma kushiwo lokho, nalu uhlu lwama-movie angama-63 amahle kakhulu edrama atholakalayo ukusakazwa khona manje. Kusuka ku- I-Black Swan , ukuhlola ngobuciko umzabalazo we-ballet savant wokugula ngengqondo oholwa kahle nguNatalie Portman, ukuze Amagciwane , Ifilimu ebabazekayo kaBong Joon-ho eshanele ama-2019 Academy Awards ngokuxuba amahlaya nokwethuka kwifilimu emangalisa ngempi yezigaba eSouth Korea, akungabazeki ukuthi kukhona okuzoba kulolu hlu okuzokwenza uhleke, ukhale futhi ucabange.
Ngokuzithoba i-Everett Collection 1/63
Kusongelwa Ifilimu eliqokwe ngu-Oscar mayelana nomndeni waseNingizimu Korea ophokophele amaphupho abo eMelika eseNingizimu, izingxenye ezilinganayo ziyajabulisa futhi zibuhlungu. Le filimu ifakazela ukuthi icishe ibe ngaphezu kwesipiliyoni saseKorea American, isipiliyoni se-Asia American, noma nesipiliyoni sabokufika sisonke, Ubuhle umnikeli uDeanna Pai ubhale ekubuyekezweni kwakhe. Esikhundleni salokho, kumayelana nokuthi abantu bangaphandle bangathola kanjani ikhaya komunye nomunye — indoda nomfazi, umlimi nomsebenzi wasepulazini, ugogo nomzukulu.
Kutholakala ukuqasha ku-Amazon Prime Video
Fox Searchlight / Courtesy Everett Collection 2/63
I-Black Swan (2010)
UNatalie Portman uwine i-Oscar ngokusebenza kwakhe njengoNina, umdansi webhaleyi okhula ngokungabi namakhanda njengoba encintisana noLily (Mila Kunis) ngendima ephambili ISwan Lake . Asifuni ukunikela ngokweqile, kepha uma uke wabona omunye umsebenzi womqondisi uDarren Aronofsky, uyazi ukuthi usesimweni esithile sokuguquka kwengqondo okumnyama.
Izici Zokugxila / Iqoqo Elihloniphekile le-Everett 3/63
Intokazi Ethembisayo (2020)
Intokazi Ethembisayo akufani nanoma iyiphi indaba yokuziphindiselela owake wayibona ngaphambili. Njengomqondisi nombhali u-Emerald Fennell wabhala endabeni ka Ubuhle, Bengicabanga kakhulu ngohlobo lokuziphindiselela nokuthi bengingakaze ngilibone kanjani ifilimu lokuziphindisela labesifazane elingelona uhambo lowesilisa ngokugqoka.
Iyatholakala ukuthenga ku-Amazon Prime Video
I-20thCentFox / Iqoqo le-Everett elihloniphekile 4/63
Uhambile Intombazane (2014)
URosamund Pike ulethe ukuthula okuzolile kuka-Amy, umlingiswa ophakathi kwinoveli kaGillian Flynn Uhambile Intombazane , esikrinini esikhulu kulokhu kuguqulwa kwencwadi. U-Amy uyalahleka, futhi kungekudala wonke umuntu uqala ukusola umyeni wakhe, uNick Dunne, obonakala enganaki kakhulu ngaso sonke isimo. Kepha ukuphambuka okuphambene kuthatha izinto endaweni ehluke ngokuphelele.
I-Columbia Izithombe / i-Courtesy Everett Collection 5/63
Abesifazane Abancane (2019)
UGreta Gerwig wengeze amathani wamandla amasha enguqulweni yakhe kaLouisa May Alcott Abesifazane Abancane , enikeza odade bakaMashi ukuthinta kwesimanje kanye nekhwalithi engenankinga. Ukulingiswa kudlala indima enkulu ekutheni lokhu kulungiswa kukuhle kanjani: Ukuthatha kukaSooirse Ronan kuJo kunempilo futhi kuyazimela, kanti uFlorence Pugh uletha uthando nokuzwela ku-Amy.
Iqoqo le-Everett / Iqoqo le-Everett 6/63
Iphrojekthi yaseFlorida (2017)
Sithanda i-movie ye-indie efana Iphrojekthi yaseFlorida elandisa indaba yocezu oluncane lwempilo namasiko aseMelika. Inganekwane ehlukanisiwe kaMoonee oneminyaka eyisithupha, umama wakhe, nabangane bakhe eMagic Castle motel eduze naseDisney World eFlorida inamandla ongafuni ukuyiphuthelwa.
Iyatholakala ukusakaza ku-Netflix
I-Columbia Izithombe / i-Courtesy Everett Collection 7/63
Intombazane, iphazamisekile (1999)
Le ndaba yeqembu labesifazane abasebasha esikhungweni sezengqondo phakathi nawo-1960 (futhi isuselwe kwisimemo sikaSusanna Kaysen sika-1993) yahlanganisa abanye babadlali abahlonishwa kakhulu kuleso sizukulwane: uWinona Ryder, u-Angelina Jolie, uBrittany Murphy, u-Elisabeth Moss noJared Leto. UJolie uze wagoduka nendondo ye-Academy yomlingisi oxhasa kakhulu. Uma ungakayiboni, kufanele ungeze kulayini.
Iyatholakala ukuqasha ku-iTunes
Iqoqo le-Netflix / Courtesy Everett 8/63
I-Black Bottom kaMa Rainey (2020)
Kunemibukiso — okushukumisa umphefumulo, okushukumisa ingqondo, okugcwala imizwa — okufika njalo kungavami ukuphoqa ababukeli ukuthi bame bese bemangala lapho befika, kubhala Ubuhle umnikeli uTanya Christian wendima kaChadwick Boseman, owokugcina ngaphambi kokushona kwakhe ngo-2020.
I-Warner Bros / i-Courtesy Everett Collection 9/63
UJudas noMesiya Omnyama (2021)
UDaniel Kaluuya unikeza ukusebenza kwempilo yonke kule biopic ngoFred Hampton, usihlalo wesahluko sase-Illinois seBlack Panther Party owabulawa yi-FBI.
Kutholakala ukusakazwa ku-HBO Max
Iqoqo leSony Pictures / Everett / Everett 10/63
Ngibize Ngegama Lakho (2017)
Le movie inganekwane ethinta inhliziyo yothando lokuqala, njengoba kwenzeka ku-Elio kaTimothée Chalamet ka-Oliver (Armie Hammer), umfundi omuhle kakhulu we-grad ohlala naye nomndeni wakhe e-Italy ehlobo. Wozela i-angst, kepha hlala izindlu ezinhle zase-Italiya nezindawo ezisemaphandleni.
Iqoqo le-Everett 11/63
Sijwayele ukubona uhlangothi oluhlekisayo luka-Awkwafina kumabhayisikobho afana Ama-Ocean angu-8 futhi Abase-Asiya Abacebile, kepha ku Ukuvalelisa isambulo esiphelele njengoBilli. Umndeni wakhe ubuyela eChina ngaphansi komshado womndeni, kepha empeleni kungenzeka ukuthi bavalelisa ugogo wakhe oshonayo, ongazi nokuthi uyagula — ngoba wonke umndeni ngeke umtshele.
Ngokuzithoba i-Everett Collection 12/63
Ukukhanya kwenyanga (2016)
Umfanekiso omangazayo kaBarry Jenkins kaChiron, owesilisa omnyama oyisitabane waseMiami, ulandela kamnandi izikhathi zesisu empilweni yakhe ezimenze waba nguyena. Le movie, elingisa oTrevante Rhodes nowanqoba i-Oscar, uMahershala Ali, idutshulwe kahle. Iphinde yazuza enkulu komunye wemikhosi ekhumbuleka kakhulu ka-Oscar, lapho ILa La Land wabizwa ngokungafanele ngokuthi isithombe esihle kunazo zonke ekuxubeni.
UGeorge Kraychyk / A24 / ngezilokotho ezinhle ze-Everett Collection 13/63
Igumbi ngaso leso sikhathi liyaphazamisa futhi liyakhuthaza. UBrie Larson udlala ngowesifazane, owathunjwa eminyakeni edlule waphinde wadlwengulwa yilowo owayemthumbile, ozama ukukhulisa indodana yakhe eyazalwa ngaleso sikhathi ekuthunjweni okusemandleni akhe — ngenkathi ebhajwe egumbini elibizwa nge-titular. Ekugcineni bayakhululeka futhi ngaleyo nkululeko kuza olunye udaba lwezinkinga. Ukusebenza okumangalisayo kukaLarson kwamklonyelisa ngemiklomelo eminingi, kufaka phakathi i-Oscar yomlingisi ohamba phambili.
Iyatholakala ukusakaza ku-Hulu
I-Warner Bros / i-Courtesy Everett Collection 14/63
Lo mdlali odabula izinyembezi kuClint Eastwood uHilary Swank njengoMaggie Fitzgerald, uweta wasedolobheni elincane onquma ukuthi ufuna ukuzama isandla sakhe esibhakeleni. Umqeqeshi uFrankie, odlalwa ngu-Eastwood, ekuqaleni ucabanga ukuthi mdala kakhulu, kepha ekugcineni unquma ukuqala ukusebenza naye, noma ngabe umsebenzi kaMaggie awukhethile ekugcineni ubeka ubungozi.
Fox Searchlight / Courtesy Everett Collection 15/63
UJuno kwaba ukushaya okungalindelekile lapho kuqala ukuphuma. Ibhalwe nguDiablo Cody, ifake inkanyezi ku-Elliot Page owaziwa njengomuntu osemncane obizwa nge-brassy ogama lakhe linguJuno onquma ukunikela ngengane yakhe ukuze itholwe ngemuva kokukhulelwa okungahlelelwe. Kakhulu ngenxa yezingxoxo ezihlekisayo zikaCody nokuzwela kwekhasi, i-movie yayihlekisa ngenkathi ithambile futhi ingokomzwelo, futhi yathola ukuphakanyiswa kwama-Award amathathu e-Academy.
Lions Gate / Courtesy Everett Collection 16/63
Le filimu eqondiswe nguLee Daniels yaziwa ngendaba yayo ejulile, ekhathaza isisu. UPrecious uyintombazane eneminyaka engu-16 ubudala ehlala ezindlini zaseSection 8 eHarlem emelana nokuhlukunyezwa okungachazeki ngokomzimba nangokocansi kubo bobabili abazali bayo. Ngemuva kokukhulelwa kabili, ekugcineni uthola ithemba kwesinye isikole esiphakeme, lapho ehlangana khona nabantu abamkhathalelayo nabamsizayo ukuhlela impilo entsha.
Fox Searchlight / Courtesy Everett Collection 17/63
UMiss Sunshine omncane (2006)
Ngemuva kokuthi u-Olive, ilunga elincane kunawo wonke emndenini wakwaHoover, ethole ukuthi ufanelekile emncintiswaneni wonobuhle we-'Little Miss Sunshine ', abazali bakhe, umalume wakhe, umfowabo, nomkhulu wakhe bagibela evenini yabo ephuzi eVolkswagen ohambweni lomgwaqo olungamakhilomitha ayi-800. Kukhona amahlaya amnyama impela, kepha uma uwonke, kungumsebenzi othandekayo wama-shenanigans omndeni.
I-Warner Bros / i-Courtesy Everett Collection 18/63
Uma ulale kule thriller emuva ngo-2013, manje yisikhathi sokukulungisa lokho. Iziboshwa imayelana nokuthunjwa kwezingane ezimbili nobaba ozibambela yena ezandleni zakhe ngemuva kokuba omunye wabasolwa ededelwe. O, futhi sike sayisho izinkanyezi uJake Gyllenhaal, uHugh Jackman, futhi UViola Davis?
I-20thCentFox / Iqoqo le-Everett elihloniphekile 19/63
Amanani Afihliwe (2016)
Udinga ugqozi oluncane empilweni yakho? Ungabheki ukudlula Amanani Afihliwe , elandisa ngendaba yabesifazane abaNsundu abakhaliphile eNASA abasize ekwenzeni uJohn Glenn waseMelika wokuqala ukuzungeza umhlaba. UTaraji P. Henson, u-Octavia Spencer noJanelle Monáe yibo Amazing njengamaqhawe empilo yangempela uKatherine Johnson, uDorothy Vaughan, noMary Jackson.
Kutholakala ukusakazwa kuDisney +
Iqoqo le-Warner Bros./courtey Everett 20/63
Kuzalwa Inkanyezi (2018)
Ngabe sisenosawoti omncane ngokwenziwe kabusha kukaBradley Cooper Kuzalwa Inkanyezi ukuvalwa ukunqoba ezigabeni ezinkulu ze-Oscar njengesithombe esihle kakhulu, umlingisi, umlingisi, nomqondisi? Uyabheja. Kepha lokho akusivimbi ekuthokozeleni le ndaba emnandi, ebuhlungu yothando ebekelwe iLady Gaga emangalisayo njengomculo ka-Ally Maine.
Ngayo yonke i-akhawunti, iParasite ingubuciko bobuciko bomqondisi waseKorea uBong Joon-ho. Ishanele ama-Academy Awards ngo-2020, yazuza ama-accolades we-screenplay ohamba phambili wokuqala, umqondisi nesithombe — ifilimu yokuqala ngqa engeyona eyesiNgisi ukunqoba esigabeni sakamuva esifiselekayo. Umdlalo ngokwawo uthakazelisa ngokuphelele futhi ulandela umndeni wakwaKim njengoba uzama ukwenza imali futhi ukhuphukele esigabeni senhlalo ngokuceba ukusebenzela umndeni ocebile.
Isithombe ngu-Alfonso Cuarón 22/63
ERoma , Iqondiswe ngumnqobi we-Academy Award u-Alfonso Cuarón, kwaba yisinyathelo sokuqala esikhulu seNetflix emhlabeni wokuqanjwa kwamafilimu. Indaba, ephefumulelwe ngokwengxenye ukukhuliswa kwakhe nguCuarón, isitshela indaba ebabazekayo yomuntu ohlala endlini nomndeni eMexico City. Iphakanyiselwe ama-Oscars ayi-10 futhi yathatha imifanekiso yasekhaya yefilimu yolimi lwangaphandle, umqondisi, kanye nesinema.
Fox Searchlight / Courtesy Everett Collection 23/63
Ishumi nantathu (2003)
Uma ujwayelene kakhulu noNikki Reed ngenxa yokuvezwa kwakhe nguRosalie Hale ku- Twilight ama-movie, kufanele nakanjani uyihlole le movie, ebiza u-Evan Rachel Wood, ngokususelwa ebusheni bukaReed. Ubuye wenza umdlalo wesikrini nomqondisi uCatherine Hardwicke lapho eseneminyaka eyi-14 nje.
I-Columbia Izithombe / i-Courtesy Everett Collection 24/63
Inethiwekhi Yomphakathi (2010)
Le ndaba emayelana nezinsuku zokuqala zikaFacebook, njengoba yadalwa nguMark Zuckerberg ngenkathi esafunda eHarvard, ayigugi-noma kuwashi lama-20. Lokhu kuyingxenye ngenxa yombhalo ka-Aaron Sorkin, umkhombandlela kaDavid Fincher, nokwenziwa nguJesse Eisenberg, Andrew Garfield no-Armie Hammer. Futhi, siyazi ukuthi usebenzise umugqa kaJustin Timberlake Uyazi ukuthi yini enhle? ngaphezu kwesisodwa.
Ngokuzithoba i-Everett Collection 25/63
UFrancis Ford Coppola IGodfather ithathwa njengomunye weminikelo ebaluleke kakhulu emlandweni webhayisikobho waseMelika. Kudlala uMarlon Brando no-Al Pacino njengamalungu omndeni weqembu elinamandla laseCorleone, le filimu yaqhubeka nokuwina u-Oscar onemifanekiso emihle kuma-45th Academy Awards. Iphinde yakhethelwa ukugcinwa njengengxenye ye-U.S. National Film Registry yeLabhulali yeCongress futhi ivame ukulandela ngemuva nje Isakhamuzi Kane njenge-movie enkulu kunazo zonke.
Iqoqo leWalt Disney Co./I-Everett 26/63
Khumbula ama-Titans (2000)
Le filimu isuselwa endabeni (eyihluzo) eyiqiniso kaHerman Boone, umqeqeshi webhola lesikole samabanga aphakeme eVirginia ozama ukuhlanganisa iqembu elihlukaniswe ubandlululo. UDenzel Washington udlala indawo kaBoone, kuyilapho abanye abalingiswa abaningi bedlalwa ngabadlali bangempela abavela kuT. C. Williams High School.
Fox Searchlight / Courtesy Everett Collection 27/63
Isigidigidi seSlumdog (2008)
Isigidigidi seSlumdog , kuqondiswe ngu Ukuqeqeshwa kwezitimela UDanny Boyle, kwaba yisasasa eliphelele lapho liqala ukukhonjiswa ngonyaka ka-2008, lenza imali engaphezulu kwamaRandi ayizigidi ezingama-378 e-U.S futhi laguqula uDev Patel noFreida Pinto baba osaziwayo bamabhayisikobho. Iphinde yazuza ama-Academy Awards ayisishiyagalombili — okufaka nesithombe esihle kunazo zonke — kodwa kukho konke lokhu kudunyiswa, abagxeki abaningi baye bathi le filimu iveze umbono omhlophe, waseNtshonalanga waseNdiya.
Ama-Open Road Films / ngezilokotho ezinhle ze-Everett Collection 28/63
Okusobala ingazibala emkhakheni wama-movie amakhulu nge-journalism — impela i Wonke Amadoda kaMongameli esizukulwaneni esisha. Ukubuka uRachel McAdams, uMark Ruffalo, uMichael Keaton, nezinye izintatheli IBoston Globe Ukuphenya ngezinsolo zokuhlukunyezwa ngokocansi esontweni lamaKhatholika kuyaphoqa njenganoma iyiphi enye into ejabulisayo laphaya.
Iyatholakala ukusakaza ku-Amazon Prime Video
Iqoqo le-Orion Pictures Corp / Courtesy Everett 29/63
Ukuthula KwamaWundlu (1991)
UJodie Foster no-Anthony Hopkins badayisa ngomdlalo we-chess wengqondo kule classic ka-1991. UHopkins udlala uHannibal Lecter, isazi sokusebenza kwengqondo esesabekayo futhi esingumbulali odla abantu ukudla, onikeza ukuqonda kumuntu oqeqeshwa yi-FBI, uClarice Starling, osebenzela udaba lomunye umbulali ogama lakhe linguBuffalo Bill. Le filimu yayithandwa ngabagxeki futhi yawina izigaba ezinhlanu ezinkulu kuma-Oscars ngo-1992.
I-Warner Bros / i-Everett Collection / i-Everett Collection 30/63
Ingxoxo ne- Vampire (1994)
Inoveli ye-gothic vampire ka-Anne Rice yalethwa esikrinini esikhulu ngale filimu, lapho uTr Cruise noBrad Pitt babedlala khona njenge-vampires ngo-1791 kuze kube namuhla. Le filimu ilandela ubudlelwano obushubile phakathi kwezimvubu uLouis noLestat, nokuthi kwenzekani lapho omunye wabo ethatha isinqumo sokuguqula intombazane eneminyaka eyishumi ubudala ibe yivampire.
Izithombe ze-TriStar / i-Everett Collection 31/63
Inkanyezi kaTom Hanks noDenzel Washington kule drama yezomthetho, okungenye yezimpawu zokuqala zaseHollywood ze-HIV / AIDS. Kule filimu, uHanks udlala ummeli nendoda eyisitabane okutholakale ukuthi ine-AIDS futhi ifuna usizo lomunye ummeli, odlalwa yiWashington, ngemuva kokuxoshwa emsebenzini ngokungemthetho.
I-United Artists / Courtesy Everett Collection 32/63
Izingcezu zika-Ephreli (2003)
Ukuhlelwa kwe-Thanksgiving sekuvele kunengcindezi, kepha le ntandokazi ye-indie iyisa ezingeni elisha. U-Ephreli, odlalwa nguKatie Holmes, unquma ukuthi uzoletha umndeni wakhe ohlukanisiwe ndawonye ukuze badle amaholide endlini yakhe ese-Lower East Side. Kukhona ukungezwani ngokomzwelo, ikakhulukazi ngoba umama ka-Ephreli utholwe enomdlavuza.
Fox Searchlight / Courtesy Everett Collection 33/63
Izilo Zasendle Zaseningizimu (2012)
UQuvenzhané Wallis waba ngumqokelwa we-Academy Award osemusha kunabo bonke emlandweni (eneminyaka eyisishiyagalolunye!) Ngokuvezwa kwakhe uHushpuppy, intombazane esencane e-Louisiana bayou eyofuna umama wakhe owalahleka ngemuva kokugula kukayise nesiphepho icekela phansi umphakathi wakubo wasemakhaya.
Iqoqo le-MGM / Courtesy Everett 34/63
UThelma noLouise (1991)
Okuqala njengohambo lwamantombazane kuphenduka into ethe xaxa ngemuva kokuthi uLouise edubule owesilisa ozama ukudlwengula uThelma endaweni yokucima ukoma. Kuyindaba yobungani nobufazi kanye nokukhetha okwenziwa ngabesifazane. Kepha ohlangothini olulula, i-movie nayo yethule umhlaba wonkana kule nsizwa egama linguBrad Pitt.
Miramax / Courtesy Everett Collection 35/63
Ukuzingela Okuhle (1997)
Akulona iphutha lakho. Akulona iphutha lakho. Uma ungazitholi ubambe izinyembezi kuleso sigaba sakudala phakathi kukaMat Damon noRobin Williams, unayo inhliziyo? Kodwa ungalali ezingxenyeni ezihlekisayo zikaDamon kanye nombhalo womngani omkhulu uBen Affleck futhi — siyawathanda nawo lawo ma-apula.
Iqoqo leParamount / Courtesy Everett 36/63
Uma ubhekile Izicingo kukwenza uzizwe sengathi ubukele indawo yeshashalazi, lokho kungenxa yokuthi ithathelwe kumdlalo kaPulitzer Prize – owawina ngo-1985 wegama elifanayo. UDenzel Washington akagcini ngokulingisa eceleni kukaViola Davis, kepha uphinde waqondisa ifilimu. Bobabili yena noDavis baphakanyiselwe ama-Academy Awards ngokudlala kwabo, lapho ethatha isicoco somlingisi.
Izithombe Zomhlaba Omusha / i-Courtesy Everett Collection 37/63
Le comedy emnyama ivame ukubhekwa njengeyokuqala Asho Amantombazane . UWinona Ryder udlala indawo kaVeronica Sawyer, oyingxenye yeqembu elidumile lamantombazane wonke abizwa ngoHeather. Akahlali kahle, kepha uvame ukuba nenkinga yokumelana nomholi weqembu, uHeather Chandler — okusho ukuthi, aze ahlangane nomfana ogama lakhe linguJ.D ohambisa izinto endaweni emnyama.
Iyatholakala ukusakaza eTubi
UBarry Wetcher / MGM / I-Everett Collection 38/63
UCreed II (2018)
Emuva ngo-2015, uMichael B. Jordan wadlala ku Kholwa , ukusontwa kosaziwayo Kunamadwala ochungechungeni lapho uRocky anquma ukuthatha indodana yombangi wakhe wangaphambili u-Apollo Creed ngaphansi kwephiko lakhe. Lokhu kulandelwa okumangazayo kuqhubeka lapho kugcine khona ifilimu yokugcina futhi kumthola elwela ukunqoba isicoco somhlaba esisindweni sosondonzima.
Kutholakala ukusakazwa mahhala ku-Amazon Prime Video
I-United Artists / Courtesy Everett Collection 39/63
Isitolimende sokuqala sochungechunge lweRocky Balboa sethule ababukeli kuleli qhawe ebingalindelekile, elisuka kubashayisibhakela abasebenza kancane, abahlala eFiladelphia baye kumpetha. Le filimu yaziwa kakhulu ngesikhathi iphuma ngo-1975, lapho ayelingisa khona uSylvester Stallone endimeni eyayizogcina isiphendukile. Ezinye izingxenye ezinhlanu zilandelwe, ngaphezu kwe- Kholwa ukuphuma ngo-2015.
Iqoqo le-Universal / Courtesy Everett 40/63
Ukukhetha kukaSophie (1982)
UMeryl Streep udlala indawo kaSophie Zawistowski, owokufika wasePoland ohlala eNew York City obelokhu egcina imfihlo enzima ngemuva kokuthunyelwa ekamu lokuhlushwa lase-Auschwitz emashumini eminyaka adlule. USophie uthathwa njengenye yezindima ezinkulu kakhulu zikaStreep futhi wamnqoba umklomelo we-Academy womlingisi ohamba phambili ngo-1983.
Tatum Mangus / Annapurna Izithombe 41/63
Uma iBeale Street Ingakhuluma (2018)
Kusizwe ngu Ukukhanya kwenyanga umqondisi uBarry Jenkins, Uma iBeale Street Ingakhuluma ukuguqulwa okuhle kodwa okulimazayo kwenoveli kaJames Baldwin ka-1974 enegama elifanayo. UKiKi Layne uyisambulo njengoClementine 'Tish' Rivers, owesifazane osemusha isoka lakhe elisolwa ngokungafanele ngokudlwengula owesifazane futhi wathunyelwa ejele.
I-20thCentFox / Iqoqo le-Everett elihloniphekile 42/63
ULeonardo DiCaprio noKate Winslet basenza siqhume njengoJack noRose, umbhangqwana ongenakulibaleka ohlangana I-Titanic kule ngqophamlando kaJames Cameron yango-1997. Sizophuma ngomlenze futhi sithi lena kuseyizindaba zothando ezinkulu kakhulu esizukulwaneni sethu, futhi ukuthola isikhathi samahora amathathu sokukhumbula idrama kuhlale kukufanele.
Ukukhishwa kwe-Strand / i-Everett Collection 43/63
Izinkinga zomjaho, ubulili, nezigaba zibhekenwe ngqo nale filimu yaseFrance ( Amabhendi Amantombazane ngolimi lwayo lwendabuko, noma noma Iqembu Lezintombi ) mayelana noMarieme, osemusha waseFrance waseFrance okhulela eParis. Iveza isiqeshana sempilo esingabonakali kaningi kumabhayisikobho aseFrance noma aseMelika, futhi ngenxa yalokho kuphela kusifanele isikhathi sakho.
Ngokuzithoba i-Everett Collection 44/63
White House (1942)
Noma ungakaze uyibone le Humphrey Bogart – Ingrid Bergman classic, okungenani uyazi umugqa wayo wokugcina odumile: Louis, ngicabanga ukuthi lokhu kungukuqala kobuhlobo obuhle. Kepha awukaze ube nelukuluku lokuthi hlobo luni lwedrama yothando oluholele kumzuzu onje? Siyathembisa ukuthi ngeke udumazeke.
Miramax / Courtesy Everett Collection 45/63
U-Audrey Tatou uheha ngokuphelele nangaphandle kwamandla njengomlingisi oyisihloko kule filimu yaseFrance — uweta okhathalele ukulungisa izimpilo zabo bonke abantu abamzungezile empilweni yakhe eMontmartre. Buka futhi uzobona ukuthi kungani aqhathanisa kaningi kangaka no-Audrey Hepburn omkhulu, ongasekho.
I-Cinedigm / i-Everett Collection 46/63
Isikhathi Esifushane 12 (2013)
Isikhathi Esifushane 12 izinkanyezi zonke izintandokazi zakho ngaphambi kokuba zidume. UBrie Larson, uRami Malek, uLaKeith Stanfield, uKaitlyn Dever, noJohn Gallagher Jr. bajoyina ifilimu ekhuluma ngeqembu labeluleki kanye nabahlali egumbini lokunakekelwa kwentsha eseCalifornia. Ifilimu elizimele laliyi-hit eSXSW futhi kufanele libukwe ngokuphelele.
Iqoqo le-Netflix / Courtesy Everett / Everett 47/63
Kube Isikhathi Eside Kangaka (2018)
Uma uthanda amadrama akho ukuba abe nengoma enhle, siphakamisa ukuthi uvule Kube Isikhathi Eside Kangaka. Izinkanyezi zomculo waseBrithani uMichaela Coel ( Ngingakubhubhisa , Ushingamu ) njengomama ongayedwa othandana nomuntu ongamazi ongaqondakali phakathi nobusuku obungavamile.
Paramount Classics / ngezilokotho Everett Col / Everett Collection 48/63
Ukuzibulala Kwezintombi (1999)
USofia Coppola waletha inoveli kaJeffrey Eugenides enegama elifanayo kulokhu kulungiswa, ebalingisa uKirsten Dunst noJosh Hartnett. UDunst udlala omunye wabodade baseLisbon, abahlala nabazali babo abavikela ngokweqile endaweni esezingeni eliphakeme. Bahlaba umxhwele iqembu labafana, elihlala lihlaselwa yimemori yabo emashumini eminyaka kamuva.
Gxila Amafilimu / Iqoqo le-Everett elihloniphekile 49/63
Intaba yaseBrokeback (2005)
Uthando lwendumezulu lomqondisi u-Ang Lee mayelana nobudlelwano obuyimfihlo futhi obuhlukumezekile phakathi kwama-cowboy amabili ase-Wyoming (ngokususelwa endabeni emfushane ka-Annie Proulx) kubuhlungu kakhulu. Ukudlala kukaHeath Ledger, uJack Gyllenhaal, uMichelle Williams no-Anne Hathaway kumangalisa njengokuthwebula okwenzeka emaphandleni. Ifilimu enhle ngempela futhi ibifanele lonke udumo olubucayi olutholile.
A24 / ngezilokotho Everett Collection 50/63
Inyoni Yentokazi (2017)
O, Inyoni Yentokazi —Kanjani sikuthanda. UGreta Gerwig's solo directorial debut, enezinkanyezi uSiorio Ronan, Beanie Feldstein, uLaurie Metcalf, uTimothée Chalamet, noLucas Hedges, bobabili babeyimpumelelo ehhovisi lebhokisi. Kuyahlekisa, kudabukise inhliziyo, kugqame futhi kuhlakaniphe — kufana nokuba yintombazane eyeve eshumini nambili ukuthola indawo yayo emhlabeni.
Iqoqo leParamount / Courtesy Everett 51/63
Le drama yomlando emayelana namamashi okuvota eSelma aya eMontgomery yango-1965 yayiholwa nguMartin Luther King Jr. yayiqondiswa ngu-Ava DuVernay kuphela — ngakho-ke uyazi ukuthi uzolungiselela indaba ehambayo nemidlalo esezingeni elilandelayo. Le filimu iphinde yazuza nengoma yokuqala ehamba phambili kuma-Oscars kaJohn Legend nokusebenzisana kukaCommon kuGlory.
Kutholakala ukuqasha mahhala ku-Amazon Prime Video
Miramax / Courtesy Everett Collection 52/63
Ukubulala uBill: Umqulu 1 (2003)
Uma lesi sithombe sika-Uma Thurman singakholakali ngokwanele, nansi imininingwane ethe xaxa ku Bulala uBill : UMlobokazi (uThurman), owayengumbulali, ufuna ukuziphindiselela ngemuva kokuthi lowo owayengumlingani wakhe uBill (David Carradine) emfaka kwikhoma lweminyaka emine ngosuku lomshado wabo. Kepha akagcini nje ngokuzingela uBill, futhi ufunga ukuthi uzobhubhisa wonke umuntu obhekene nokweba iminyaka yempilo yakhe nokubulala ingane yakhe engakazalwa.
Izithombe zeMagnolia / i-Everett Collection 53/63
Wadutshulwa ngokuphelele kuma-iPhones ukuze kube nomphumela omuhle, IsiTangerine yifilimu ekhuluma ngomuntu osebenza ngocansi oweqisa isoka / pimp lapho ezwa ukuthi wamkhohlisa ngesikhathi esejele. IsiTangerine ikhonjiswe okokuqala kuSundance Film Festival futhi njengamanje iphethe isilinganiso esingu-96% kumaRotten Tomatoes.
I-Warner Bros / i-Courtesy Everett Collection 54/63
Umnyama Knight (2008)
UHeath Ledger oshonile ngemuva kokudlala iJoker efilimini yesibili kaChristman Nolan kumafilimu amathathu kaBatman kufanelekile. Uyisithombe esibi kakhulu kumkhankaso we-caped crusader kaChristian Bale. Bonke abanye ababalingisi befilimu — okubandakanya u-Aaron Eckhart, Michael Caine, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman, noMorgan Freeman — nabo abayona le nto.
Inkampani ye-Weinstein / i-Courtesy Everett 55/63
Indaba yothando phakathi kukaCate Blanchett's Carol, owesifazane odivosile, noRooney Mara's Therese, umthwebuli wezithombe ofisayo, ngawo-1950 iNew York City ingaba maphakathi neprojekthi kaTodd Hayne, kepha isitayela sefilimu naso sivela kuNkulunkulu. Woza ukuthandana okuhle, futhi uhlale emfashini enhle.
Iqoqo le-Everett 56/63
I-Black Panther (2018)
Yebo, izinganekwane ezinkulu zingaba yimidlalo ehehayo njengefilimu ezimele ehlonishwa ngokugxeka. Futhi I-Black Panther mhlawumbe isibonelo esihle kakhulu salokho. Le movie ye-Marvel emayelana nezwe eliqanjiwe laseWakanda bobabili beyi-blockbuster hit futhi indumezulu echaza isiko. Uma ngandlela thile uyiphuthele ngenkathi iphuma ngo-2018, yibuke manje.
ukwesekwa eceleni phusha ubra
I-Sony Pictures / Courtesy Everett Collection 57/63
U-Isabelle Huppert uyamangalisa kukho konke akwenzayo, futhi lokho kufaka phakathi ukuhlonishwa okukhulu Yena . Kwifilimu yaseFrance, uHuppert udlala indawo kaMichèle, ongusomabhizinisi ophumelele odlwengulwa endlini yakhe ngumhlaseli ovale ubuso. Uqala ngokuthatha isinqumo sokungakubiki ukuhlaselwa, futhi okulandelayo ukubuka okubabazekayo ezindleleni eziyinkimbinkimbi abhekana ngazo nokuhlukumezeka kwakhe.
I-Warner Bros / i-Courtesy Everett Collection 58/63
UJennifer Lopez ulingisa njengo-Selena obizwa ngesihloko kulo mdlalo omlandisayo mayelana nesihlabani sangempela somculo weTejano u-Selena Quintanilla-Pérez, owabulawa kabuhlungu ngumongameli weqembu lakhe labalandeli ngesikhathi umsebenzi womculi uqala. Kwakuyindima yokuphumula kuLopez, owathatha ngokuphelele lo mculi osehambe kakhulu.
ISony Pictures Classics / Courtesy Everett Collection 59/63
UMiles Teller noJK. Inkanyezi yeSimmons in I-Whiplash , umdlalo weshashalazi omayelana nomfundisi we-jazz okhuthele nohlukumezayo nomvikeli wakhe wesigubhu. Ngenkathi u-Andrew Neiman (Teller) engena eqenjini lomculo we-jazz elite more music elite more, i-drummer izithola ikhonjwa nguthisha wayo okhathazekile, uTerence Fletcher (Simmons). Uma inhliziyo yakho ikwazi ukubhekana nengcindezi, hlola le movie.
Izikhangibavakashi zomgwaqo / i-Courtesy Everett Collection 60/63
Ithambo Lasebusika (2010)
Kuningi kakhulu ongakwenza Ithambo Lasebusika ngaphezu kwengubo ebomvu kaJennifer Lawrence ebomvu yesikhathi sika-Oscar. U-Lawrence ulingisa endimeni yakhe yokuphumula njengoRee Dolly, osemusha wase-Ozark onikezwe umsebenzi wokunakekela izingane zakubo ezimbili. Ngemuva kokuzwa ukuthi ubaba wakhe wabeka indlu yomndeni wakhe ukuze ibe yisibopho ngaphambi kokunyamalala, uRee kumele aqale uhambo oluyingozi lokumbuyisa.
I-ERIKA DOSS 61/63
Inzondo U Nikeza (2018)
Ngokuya ngencwadi ka-Angie Thomas enegama elifanayo, Inzondo U Nikeza —Mayelana nomfundi oneminyaka engu-16, uSarrr (Stenberg), obona umngani wakhe omkhulu ebuntwaneni ebulawa yiphoyisa — izinkanyezi Amandla Stenberg, Regina Hall, Common, Anthony Mackie, nokuningi. Ngemuva kokushona kwakhe iba yindaba yezindaba zikazwelonke, uStarr uthatha indima ebandayo yomphakathi emibhikishweni.
Iyatholakala ukusakaza ku-HBO
Iqoqo le-Universal / Courtesy Everett 62/63
U-Erin Brockovich (2000)
UJulia Roberts waba ngumlingisi wokuqala owake wazuza i-Academy Award, i-BAFTA, i-Critics 'Choice Movie Award, iGolden Globe Award, iNational Board of Review, ne-Screen Actors Guild Award ngendima yakhe njengo-Erin Brockovich, owesifazane wangempela owaphenya walwa inkampani yamandla iPacific Gas and Electric Company (PG&E) ngemuva kokukhubeka uzungu olukhulu.
Iqoqo le-Universal / Courtesy Everett 63/63
UBilly Elliot (2000)
Lapho indodana yomvukuzi waseNgilandi, uBilly Elliot (usana uJamie Bell), ethola i-ballet, uthola uthando nothando angakaze alubone ngaphambili. Ngeshwa ubaba wakhe akahambisani nalokhu. Ngiyaqunga isibindi sokuthi ungahleki futhi ukhale ngaleli bhayisikobho enhle, efaka noJulie Walters oyisithonjana njengomfundisi wokudansa nokubhema ugwayi wamaphupho akho.
ngidinga isitayela esisha sezinwele
lapho ngigeza ubuso bami ngithola izinduna eziningi
hlanganisa futhi uqondanise isethi yamacici
uthanda izingoma ezikukhalisa
imikhiqizo engcono kakhulu yokushintsha isuke ezinweleni ezikhululekile iye ezimeni zemvelo